Xirmooyinka Duulimaadka ee Airbus A330 FSX/P3D Bilood 5 2 todobaad ka hor #1614
Waan ku faraxsanahay inaad ku darto Cebu Pacific hore iyo nolol cusub oo ku saabsan addon cusboonaysiinta. Mahadsanid. Waa tanaa sida loo yaqaan 'Cebu Pacific livery'. Waan ka xumahay in Ingiriisigeygu xun yahay. Laakiin si kasta oo halkan ah waa sida ay u egtahay qaribkii hore iyo tan cusub ee Cebu Pacific.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.226